Dirqaalaalee galmee barruu
Dirqaalaalee Barreessaa LibreOffice
Qindaa'inootni kunneen karaa galmeeleen barruu kan LibreOffice keessatti uumaman qabataman qindeessu. Galmee barruu ammeetiif qindaa'inoota qindeessuun ni danda'ama. Qindaa'inootni hundataa ufmaan olkaa'amu.
Focquuwwan Bu'uuraa (Western)
Qindaa'inoota bocquuwwan bu'uuraaf ifteessa.
Focquuwwan Bu'uuraa (Asian)
Bocquuwwan Bu'uuraa (CTL)
Qindaa'inoota goodayyaa kan ufmaan waantota saagamanitti dabalaman ifteessa.
Ergaa-e makiinsa ergannoo
Title is: Dirqaalaalee galmee barruu